Dhageyso: Puntland "Hal maamul ayaa Gaalkacyo xukumi doona dhowaan" - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso: Puntland “Hal maamul ayaa Gaalkacyo xukumi doona dhowaan”
Dhageyso: Puntland “Hal maamul ayaa Gaalkacyo xukumi doona dhowaan”
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa markii horreysay waxa uu sheegay in magalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu maamuli doono hal maamul, kaas oo ka shaqeyn doono sugida amniga.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Xasan Maxamed Abgaalow ayaa sheegay in Gaalkacyo ay haatan amnigeeda ay ka wada shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa isku-dhafka ah ee loo sameeyey, islamarkaana ay wax ka beddeleen amniga magalada.
Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in haatan uu socdo qorshe lagu doonayo in hal maamul loogu sameeyo magalada Gaalkacyo si uu u xukumo, kaas oo uusan shaacin Puntland iyo Galmudug maamulka uu noqonayo.
Gabagabadii waxa uu ugu baaqay shacabka ku nool magalada Gaalkacyo in sugida amniga ay kala shaqeeyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa isku-dhafka ah ee magaalada loo sameeyey.
Hadalkan weli wax jawaab ah dhankooda kama soo bixin maamulka Galmudug oo maamula Koonfurta Magalada Gaalkacyo.
Hoos ka dhageyso hadalka guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland.